सरकारी शिक्षकको तलब कति ? हेर्नुहोस् तालिका | Educationpati.com
सरकारी शिक्षकको तलब कति ? हेर्नुहोस् तालिका
२०७३ माघ २० गते ०८:११मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले २०७३ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरुसँगै सरकारी शिक्षकको समेत २५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तलव स्केल अनुसार सरकारी शिक्षकहरुको तलब २० हजार ६ सय ७४ देखि ४८ हजार १ सय ७८ पुगेको छ ।
प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब २० हजार ६ सय ७४ देखि ३८ हजार ६ सय ३६ रहेको छ । त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकको तलब २९ हजार ७ सय ६४ देखि ४० हजार ६ सय ६० र माध्यमिक तहका शिक्षकको तलब ३८ हजार ३ सय ३६ देखि ४८ हजार १ सय ७८ पुगेको छ । यस बाहेक शिक्षकहरुले औषधी उपचार, दूर्गम लगायतका भत्ता समेत पाउँदै आएका छन् ।
सरकारी तलब खाने शिक्षक कति छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकको संख्या एक लाख ५२ हजार ६ सय ९ छ । जसमध्ये स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रावि तहमा ८० हजार, निमाविमा १६ हजार २ सय ४, माविमा १२ हजार ७ सय १८ र उमाविमा २ हजार छन् भने राहत अनुदानमा प्रावितर्फ २२ हजार २ सय ११, निमावि तर्फ ९ हजार ६ सय ६०, मावितर्फ ५ हजार ६ सय ४० र उमाविमा ४ हजार रहेका छन् ।